‘फाटेको जुत्ता’ निर्माताले सर्वेन्द्र खनाललाई भेटेर के दिए ? « Ramailo छ
‘फाटेको जुत्ता’ निर्माताले सर्वेन्द्र खनाललाई भेटेर के दिए ?
फिल्म ‘फाटेको जुत्ता’ निर्माण युनिटले राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको छ । निर्माता अर्जुन कुमारले महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका डिआइजी सर्वेन्द्र खनाललाई भेटेर ट्राफिक व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने सामाग्री सोमबार हस्तान्तरण गरेका छन् ।
राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न प्रहरीसँग साम्रागी पर्याप्त नभएपछि फिल्म युनिटले सक्दो सहयोग गरेको निर्माता अर्जुन कुमारले बताए । निर्माता कुमारले ३५ वटा ट्राफिक साइन वोर्ड प्रदान गरेका हुन् । ‘गो’ र ‘स्टप’ लेखिएका वोर्ड पाएपछि डिआइजी खनालले भने, हामी यसको सही सदुपयोग गर्छौ ।
सौगात मल्ल, प्रियंका कार्की, रविन्द्र झा लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहेको फिल्म ‘फाटेको जुत्ता’ यही कात्तिक १७ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । फिल्मलाई यसअघि ‘जीन्दगी रक्स ‘निर्देशन गरेका निकेश खड्काले निर्देशन गरेका हुन् ।